MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » 2011 » maj
Waxa shalay Isniin 31 maj 2011 ku geeriyootay magaalada Hargeysa Alla ha u naxariistee Shugri Axmed Xaashi oo in mudo ah la il darnayd xanuun ka haleelay dhinaca cunaha oo aad u bararay.
Maamulka bogga Caafimaadka.com waxaanu tacsi u diraynayaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxday, Shukri Axmed Xaashi. Ilaahay naxarsiitii Janno ka waraabiyo. Warbixin marxmuuda intii ay noolays ka hadlaysa ka akhriso halka hoose!!!!!!!! SDWO (Hargeisa 31/05/2011) Alla ha u naxariistee waxa shalay Isniin ku geeriyootay magaalada Hargeysa Alla ha u naxariistee Shugri Axmed Xaashi oo in […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Dhiig karka (High blood pressure) qaybtii 1 aad
Maanta maqaalkeenani wuxuu ku saabsan san yahay dhiig karka. Waxaynu maqaalkii hore kaga soo hadalnay Wadne-istaaga. Maqaalkana haddii Ilaahay yidhaahdo waxaynu ku eegoi doonaa cudurka Dhiig karka.
· admin	· 2 Comments Posted in: Maqaalo	Laabjeex (Heartburn)
Laabjeex (Heartburn) Laabjeexa waxa laga dareemaa qeybta sare ee caloosha, waxaan la dareemaa xanuun olol oo kale ah oo soo gaadha laabta. Waxaana keena cuntada uu qofku cunay iyo aysiidha caloosha oo u soo baxay hunguriga waxa kale oo keeni kara dawooyinka qaarkood. Laabjeexu waa wax isk caadiya laakiin ku yara xanuujinaya ama ku dhibaya. […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Wadne-istaaga / Heart attack
Wadne-Istaaga (Heart attack) Wadne istaag Waxaa beryahan danbe ku soo badanaya dadka dunnida ku nool, wadne istaaga, gaarahan dadka soomaalida. Haddaba waxa aynu isku dayi doonaa haddii Eebe idmo in aynu wax ka taataabano cudurka wadne-istaaga. Wadnaha. Wadne-istaaga 16 maj 2011 wadnuhu waxa uu ku yaallaa bartama laabta oo xigta dhinaca bidix in yar xigta. […]
· admin	· 2 Comments Posted in: Maqaalo	World Health Summit 2011 in Berlin, Germany
World Health Summit 2011 Today’s Science – Tomorrow’s Agenda October 23rd-26th, 2011, Berlin, Germany Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte Langenbeck-Virchow-Haus For 2011, the World Health Summit under the motto “Today’s Science – Tomorrow’s Agenda”, will focus on non-communicable diseases and the role of mass media in health promotion, new approaches in research and innovation, […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Wasiirka Caafimaadka Somaliland oo U Anba baxay Geneva si uu uga qayb galo kulan lagu soo casuumay
Hadhwanaagnews) Saturday, May 14, 2011 Hargeysa(HWN) Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Somaliland Xuseen Muxumed Maxamed (Xuseen Xoog) ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee cigaal International Airport. Hargeysa(HWN) Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Somaliland Xuseen Muxumed Maxamed (Xuseen Xoog) ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee cigaal International Airport. Wasiirka ayaa sida uu u sheegay warbaahinta magaaladda Geneva kaga […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	JADEECADA (MEASLES)
JADEECADA (MEASLES) Waa cudur aad la isku qaadsiiyo waxaana keena feyris kaas oo inta badan ku dhaca caruurta ka yar shan sanadood. Cudurkan waxa uu ka mid yahay cudurada sida aad ka ah u dila caruurta in kastoo uu jiro talaal aad u fiican oo lagaga hor tagi karo cudurkan hadana waxa u dhinta cudurka […]
Kaalinta caafimaad ee fitamiin D-ga (vitamin D) iyo Cudurka Ootisam (Autism) Maqaalkan waxaa soo diyaariyey: Dr Axmed Cumar Cabdi (Axmedbaashi) Dr Axmed Cumar Cabdi (Axmedbaashi) Caafimaad-darada dhulalka qaboobaha Qaybta 3aad: Kaalinta caafimaad ee fitamiin D-ga iyo Cudurka Ootisam (Autism) Xujooyinka loo hayo in Fitamiind D-yaridu iyo Meerkuridu keeni karaan Ootiisamka 1) Xogo kooban oo la […]